Heloka hibaboana • AoRaha
Nivoaka iny ny tatitra momba ny fanodinkodinam-bola goavana teo anivon’ny orinasa Jiro sy Rano Malagasy (Jirama). Tsy hidirana lalina intsony, angamba, satria efa novoizina tamin’ny fampahalalam-baovao samihafa. Faritra maromaro no nahitana ny gaboraraka sy ny halatra saingy azo antoka fa tsy ireo fotsiny matoa tsy mety tafarina mihitsy ity orinasam-panjakana malaza amin’ny fampijaliana mpanjifa sy ny fanambakana ity.
Marina loatra io fanambakana io satria tsy misy tsy mikaikaika raha vao Jirama no resahina. Ny delestazy mitohy isan’andro vaky ary manginy fotsiny ny fijaliam-bahoaka amin’ny famatsian-drano. Ny kalitaon’ny asa atolotra ny mpanjifa “zero” manatody nefa ny faktiora midangana andro aman’alina. Iaraha-mahalala fa ny mpanjifa hatrany no terena hameno ny banga amin’ny halatra bevava ataon’ny sasany eo anivon’ity orinasa ity.
Ny tena mahavariana dia tsy maintsy mahita havaly foana tompon’andraikitra, rehefa misy ny fitarainana. Ny heloka hibaboana, hono, mody rariny, koa mba mianara mahay miaiky heloka rehefa misy ny lesoka sy ny tsy fahaizana mitantan-draharaha fa aza ny mpanjifa ampitondraina hazo fijaliana lava izao e. Mila mihetsiketsika amin’izay koa ny fanjakana amin’ny fanatanterahana ny “Velirano” sao ho ritra miandalana eo ihany ny rano ka voavelin’ny vahoaka amin’ny kanota eo vao hosahirana.
Antenimierampirenena :: Tsy misy misolo tena ireo distrika efatra